चितवनमा रमिता छ! | Dinesh Khabar
२०७६ असोज ३, १०:४४
चितवन अचेल रमिताको सहर बनेको छ। केही समयअघि त्यहाँ रवि लामिछानेको रमिता थियो। अहिले अर्कै रमिता छ। चितवन मेडिकल कलेज १५ दिनदेखि बन्द छ। आमाबुबाको लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर डाक्टर र नर्स पढ्न कलेजमा आएका विद्यार्थी दुई सातादेखि आन्दोलनमा छन्।
प्रहरीले उनीहरूमाथि कहिले गाली बर्साएको छ, कहिले लाठी। कहिले उनीहरूलाई आफ्नै अस्पताल छिर्न रोकेको छ, त कहिले पक्रेर थुनामा राखेको छ। विद्यार्थीहरूको माग सरल छ- डाक्टर र नर्स पढ्न मन्त्रिपरिषदले तोकेको शुल्क मेडिकल कलेजहरूले लागू गरून्। मेडिकल कलेजहरूले यसअघि लिएको अवैधानिक शुल्क फिर्ता गर्न शिक्षा मन्त्रालयले दिएको लिखित निर्देशन पालन गरून्।
यो मर्त्यलोकमा अर्को कुनै मुलुक छैन होला जहाँ मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय र मन्त्रालयले दिएको निर्देशन पालना गराउन विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिन्छन्, प्रहरीको लाठी खान्छन्। अनि सरकार चुपचाप बस्छ। प्रिय सरकार, मन्त्रिपरिषदले तोकेको शुल्कभन्दा बढी लिएर ठगी गर्ने मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई प्रहरीले थुन्नु पर्ने हो कि त्यसको विरोध गर्ने विद्यार्थीलाई?
त्यसैले त चितवनमा कहीँ नभएको रमिता छ। अनि एक नम्बरको रमिते बनेको छ सरकार। गएको माघमा यस्तै आन्दोलन गण्डकी मेडिकल कलेजमा भएको थियो। गण्डकी मेडिकल कलेजले एमबिबिएस पढ्न मन्त्रिपरिषदले तोकेको ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँभन्दा धेरै शुल्क लिएको विरोधमा विद्यार्थीले आन्दोलन गरे। कक्षा बहिष्कार गरे।
कलेजले टेरेन। सरकारले सुनेन। उनीहरूले पनि लत्तो छाडेनन्। एमबिबिएसका विद्यार्थीले तेस्रो वर्षको जाँचै बहिष्कार गरे। सरकारले तोकेको शुल्क कार्यान्वयन नगराई नछाड्ने दृढताका साथ ५४ दिनसम्म आन्दोलन गरे।
यी विद्यार्थीलाई न्याय दिनै पर्छ। यो लेख अमित ढकालले सेतोपाटीमा लेखेका छन्।
२०७७ असार २७, ०२:२१
विपद् व्यवस्थापनमा वन तथा वृक्षको भुमिका